SEENAA GABAABDUU FALMATAA (CACCABSAA) (UMAR ABRAAHIM GALMOO) 1954 - 1980 Oromia Shall be Free |
SEENAA GABAABDUU FALMATAA (CACCABSAA) (UMAR ABRAAHIM GALMOO) 1954 – 1980
bilisummaa April 15, 2018	Comments Off on SEENAA GABAABDUU FALMATAA (CACCABSAA) (UMAR ABRAAHIM GALMOO) 1954 – 1980
Ebla 15, 2018
Qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa tan Jaarraa (bara 40) tokkoo ol gaggeeyfamaa jirtu keessatti, jiini seenaan gootummaa fii injifannoo keessatti hin galmaawin hin jiru. Haa tahu malee, akkuma injifannoon wal caaltuun – gootummaa niis wal dhabduun, seenaa keessatti hojjatameen, ji’oonni niis walirra hanga’iinsa qabu. Madaala kanaan, seenaan Ebla 15, bara 1980 keessatti hojjatame, ji’a Eblaa kanneen biraa tiin adda godhee jira. Guyyaan kuni, guyyaa karoorri diinni ummata Oromoo adda qoqqooduuf baroota dhibbaa oliif irratti hojjachaa bahe qabsaawotaan jalaa laamshaawe. Guyyaa, dagaagina tokkummaa lammii kan, bara dabre, kaa’imman miliyoona jahaa oliin, Irreecha Hora Arsadetti miidhagee mul’ateef bu’ura tahe.
Haala armaa olii tiif, gocha seena qabeeysa tahe hojjachuun galmee seenaa qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa keessatti faaruu daangaa hin qabneen warra faarfamuu qaban keessaa tokko Falmataa (Umar) Abraahim Galmoo ti. Falmataan, Baha Oromiyaa Konyaa Gaara Mu’l’ataa Aanaa Kurfaa Callee Araddaa Ganda Jirruu kan ededa Gaara Mul’ataa jala jirutti, Abraahim Galmoo fii Meeyram Aadamirraa toora bara 1954 keessa nama dhalate.
Akkuma daa’imman gandaatti Falmataa niis umrii joollummaa isaa kan dabarse beeyladaa tiiysuu fii hujii qonnaa tiin warra gargaaruu dha. Garuu, yaroo hujiilee tanarratti bobbahu, haallan aadaa fii seenaa hawaasaa callaqqisan, joollee gandaa mara caalaa, hordofaa ture.
Fedhiin aadaa fii seenaa hordofuu tan daa’imummaan Falmataa fudhatte, isaa waliin guddattee, geerara, dhiichisaa fii mirriiysaan dandeeytii addaa horsiifte. Haalli isaa kuni, hiriyoota bira dabaree hawaasa naannoo san jiran hunda keesatti isa beeysisee, fuudhaa fii heeruma naannoo sanii dabaala isaa tiin alaa gatii dhoorke. Shaggooyyee fii goofanni mana awaataa bakka inni hin-jirretti mirqaana dhablee tahan.
Dandeeytiin Falmataa tan hawaasa Diida Nuunnuu fii Meettaa malees kan Gaara Mul’ataa dhunfatte tuni, ji’a Gurraandhalaa tan bara 1976-a, isaan bira dabartee, lammii Oromiyaa maraaf ifa baate. Gaafni kuni, gaafa agarsiisa aadaa saba Oromoo, kan kaa’imman naannoo hundaa irratti arkaman Finfinnee keessatti gaggeeyfame.
Karoorri qophii tanaa akka baheen, dameen qopheeysitootaa, yaadicha karaa namoota adda-addaa tiin hawaasa Oromiyaa keessa loosanii, akka oduun isii gurra manguddoota Baha Oromiyaa seenteen, koree fiixa baaftu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhaaban. Koreen, haala qubsumaa, geejjibaa fii leenjii akka qopheeyfataniin, Baha Oromiyaa keessatti, magaalotaa fii baadiyyoota Gammoojjii Anniyyaa kaasee hamma Baddaa Carcaritti, kaa’imman beekkomsa, shaggooyyee, dhiichisa, mirriiysaa, geerarsa, hellee, hellemaa fii kkf tiin dubraa fii dardarri faarsan yaroo barbaadan, Falmataan kan angafaa tahe.
Gaafa qophii agarsiisa aadaa, Gurraandhalaa 28, bara 1976, Baha Oromiyaa malees, guutuu Bareentumaa, Booranaa, Maccaa fii Tuulamaa irraa dubraa fii dardarri uffata aadaa adda-addaa tiin miidhagan, sirboota aadaa naannoo isaanii agarsiisuuf, Finfinnee dhufanii, galma Dargiin barnoota siyaasaa keeysatti barsiifsaa turetti, wal duraa-duubaan dooyaarratti bahan.
Gaafana, Falmataan, marxoo aadaa, biliqqee, waraansillee galkaa billawni Tojorraa itti suuqame mudhii hidhatee, goofaretti filaa suuqee, waan irra hedduun namaa hasaasuu sodaatu, kan gariin dhagayeetiirraa baagaru, dooyaarratti bahee, eeboo lulaa – billawa ciniinaa;
Halkani deema malee, waraabo waa kophee hin qabuu
Ciisee galaalcha malee, leenci waa hirriiba hin qabuu
Wajjumaan nyaanna malee, wajjumaan yaana malee
Diinaa waliin garaan keenya, waa fayyaa nu hin qabu
jechuun, sagalee akka leencaatti bookkiftuun luuynummaa galma keessaa arihee, onnee namoota achi keessa turanii danfise.
Gaafa san booda, Falmataan jiruu gabrummaa irraa sammuu walaboomse. Kaa’imman dandeeytii fii fedhii aadaa guddisuu qaban gurmeeysee, hawaasa keessa daddeemee, agarsiisa aadaa, dawwiilee fii geerara isaa tiin ummata dammaysutti bobbahe.
Isaa sanitti jiru, dirreen qabsoo bilisummaa Oromoo saaqamte. Yaruma san ammaas, Soomaaleen hawwii isii tan dangaa hamma Awaashitti bal’ifachuu fiixa baasuuf waraana isii Oromiyaa keessa nayxe. Falmataan, tana keeysa Soomaalotarraa leenjii tooftaa lolaa fii miya waraanaa fudhatee, fedhii isaaniitti duuyda garagalee, hidhannoo isaa waliin, dirree qabsoo bilisummaatti makame.
Dirreen qabsoo gootummaa Falmataa mirkaneeysuuf yaroo irraa hin fudhanne. Falmataan duula seenu hunda keessatti goobaan galaa dhufe. Haalli kuni, qabsaawota biratti kabajaa fii jaalala hoonga hin qabne muude. San malees, yaroo gabaabduu keessatti sullama hoogganaarra ol loose. Isaa tana keeysa jiru, jila ABO kan gama Soomaalee akka deeman murtaawe irraa tokko tahe.
Imaltuu tanaaf, Bariisoo Waabee (Magarsaa Barii), Gadaa Gammadaa (Damissee Tacaanaa), Abbaa Xiiqii Hinsarmuu (Abboomaa Mitikkuu), Doorii Barihamoo (Yigazuu Bantii), Irra Aanaa Qacalee/Dhiinsaa (Abdi-Nuur Sheekh Hassan), Faafam Dooyyoo (Abdii Harar), Marii Galaan, Dhaddacha Boruu, Qeerensoo Dhaabaa fii Dhaddacha Mul’ataa waliin, Ebla 08, bara 1980, karaa seenan.
Amna dheertuu tanaaf Laga Gaaleeytii irraa ka’anii, Anniyya keessaan Qumbiitti bahan. Qumbiitti hidhannoo dhiisanii, harka duwwaa karaa Mayyuu tiin Mullu dhaqan. Mullurraa lafa Gammoojjii Ogaadeenitti fullahan. Haala kanaan qarmaammee irraa amna guyyaa torba akka fagaataniin, Ebla 15, bara 1980, isaanii qalbii takkaan deemaa jiru, lafa Shinniga ja’amtutti, saylii waraana Soomaalotaa takkaan walitti bahan.
Sayliin waraana Soomaalee tan qabsaawotaan walitti bahan tuni, garee waraana lammii Ogaadeen kanneen waraana Soomaalee waliin Dargiin lolaa turan irraa warra hafan. Warra maqaa Xuufaan moggaafatanii, nama Indha-Yaree ja’amuu kan murna Labaad ja’amurraa fottoqeen hoogganamani.
Jarri, namoota harka qullaa deemu agarraan marsanii dhaabanii sakatta’an. Yaroo sakatta’an, galaa deemmataniin malees diinaggee fii barruulee adda-addaa irratti arkan. Yaroo haala isaanii gaafatan, miseensota waraana Adda Bilisummaa Oromoo tahuu fii haala diplomaasii tiif mootummaa Soomaalee biratti deemaa jiraachuu baran.
Haala isaanii kanaan, diinaggee, galaa fii miya dhunfaa kan deemmataniin irraa fudhatanii yo gadhiisan, olee-bulee, itti gaafatamuun isaanii akka hin oolle hubatan. Akka nagayaan hin gaggeeysinees miyaa fii horii deemaniin irraa ka’uu dadhaban. Kanaaf waan godhuu qabanirratti wal-qaban. Marii godhaniin, isaan keeysaa kanneen amantiin Islaamaa qaban if duuda deebisuu fii warra Kirstaanaa gadhiisuu dhabarratti walii-galan.
Murtii armaa olii, tan irratti waliif galan, qabsaawotaan gayanii, Islaamaa fii Kirstaanatti akka adda bahan ajajan. Yaroo tana, Falmataa fii kanneen amantiin Islaamaa qaban “beey magan! Tuni nutti hin-taatu. Nuti ilmaan abbaa tokkoo ti. Jiraannuus – duunuus teenya hireen walii ni. Abadan amantiin adda hin baanu,” ja’anii kophaa bahuuf didan. Jarri qabsaawonni murtii tanarraa ka’uu dhaba akka hubataniin, guyyuma qaban kana, Ebla 15, bara 1980, yaroo gama Asrii, Falmataa fii qabsaawota tarree galanitti dhukaasa bananii wal-cinaa ciciibsan.
Haala kanaan Falmataa fii qabsaawonni amantiin Islaamaa, dhaadannoo, “Oromoon amantiin adda hin baatu!” jattu, tan Caamsaa 15, bara 1966, magaalaa Ittayyaa tan Godinaa Arsiitti, Waldayni Maccaa fii Tuulamaa Islaamaa fii Kirstaanni lammii Oromiyaa 100,000 ol walitti qabanii, waliin qalchiisanii, waliin nyaachisanii, “nuti ummata tokko” jachisiisan, hujiin mirkaneeysan.
Falmataa fii qabsaawonni hujii qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa keessatti seena-qabeessa taate, tan yoomuu irraanfatamuun hin-malle, tan dhaloonni dhufaa-jiru ittiin boonu hojjatan kuni, jeeynota jeeynotaa olii ti. Seenaan isaanii seenaa qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa keessatti, boqonnaa duraatti, qalama dahabaa tiin kan barreeyfamu. Siidaan isaanii, wabii tokkummaa tii fii mallattoo wal’aansoo saniif gaggeeyfatee tiif, wiirtuu magaalota gurguddoo Oromiyaa walakkatti kan dhaabbatu taha.
Rabbi Jannataan haa qanani’u!
Next DEMOCRACY: A PRESCRIPTION OF CYANIDE PILLI TO THE ABYSSINIA & CONT.TPLF TYRANNY